Maxaa ka jira in heshiis horudhac ah ay gaareen Axmed Madoobe, Xiddig iyo Seeraar? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in heshiis horudhac ah ay gaareen Axmed Madoobe, Xiddig...
Maxaa ka jira in heshiis horudhac ah ay gaareen Axmed Madoobe, Xiddig iyo Seeraar?
Nairobi (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya, in uu jiro is-afgarad aan weli la dhammeystin oo dhexmaray dhinacyada isku haya Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, Xildhibaan Xiddig iyo Cabdinaasir Seeraar.
Xubnahaan ayaa isku qabtay arrimaha doorashooyinkii Jubbaland ka dhacay sannadkii hore, balse waxaa Maalmihii la soo dhaafay ku wada hadal siinayey Magaalada nairobi Xubno ka socda Dowladda Kenya.
Warar kasoo baxaya kulamo maalmahaan u socdey saddexda mas’uul ayaa waxaa ay sheegayaan inay 6 qodob ku heshiiyeen dhinacyadan, iyaga oo dhawaan war-saxaafadeed soo saari doona.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtey doorashadii ka dhacdey Magaalada Kismaayo ee lagu doortey Axmed Madoobe, balse lama oga waxa ay ka yeeli doonto heshiiska ay wada gaareen saddexdan Mas’uul.
Xiddig iyo Seeraar oo heshiis gaaray